XIKOO inotakurika maindasitiri mweya inotonhorera kune gaint imba yekuchengetera
Fordeal kambani hombe yakazara yekuyambuka muganho e-commerce imba yekuchengetera iri muFoshan City, ine nzvimbo yekuchengetera yezviuru zvemamirimita. Muzhizha rinopisa kumaodzanyemba kweChina, mhando iyi yedare remba yedare rinopisa kwazvo pasi pemaawa marefu ezuva rinopisa. Kuti uvandudze mhando ...
XIKOO mhepo inotonhorera inotonhorera yekudhinda musangano
XIKOO ine makore anopfuura gumi nemana ruzivo mune yekufefetedza uye kutonhora kwemusangano. tinoramba takazendamira nguva dzose uye tichiunganidza ruzivo rweinjiniya, saka XIKOO ine nzira dzinovaka dzekuvaka uye ine ruzivo rwekugadza nekutuma masters timu. Shenzhen Quanyin Grap ...
Xikoo Indasitiri Kudzivirirwa Kwemamiriro ekunze Mhepo Inotonhorera Workshop Kutonhora Scheme Dhizaini Yekudzivirira
XIKOO mhepo inotonhorera kutonhodza dura guru
Muchirimo, matura akavakwa nesimbi, dzimba dzesimbi, uye madziro zvinoratidzirwa kune kwakanyanya kupisa. Mhepo yemukati inodziya. vashandi havagone kushanda munzvimbo ino. Uye zvinhu zvacho zviri nyore kuenda zvakashata nekukura mabhakitiriya, uye zvakare zvinogona kukonzera tsaona dzemoto Saka, zviri kukurumidza ...
XIKOO maindasitiri emhepo inotonhorera Kutonhorera uye kufefetedza system kuisa chirongwa cheXincun Middle School 's kantini
Kendini yeXincun Middle School ine nzvimbo yakakura 6,500 mita mita. Kana isina mweya wakanaka uye inotonhorera system kuGuangzhou ine tembiricha yakakwira gore rese rakatenderedza, zvinogona kukonzera kuti kantini ive inopisa uye sultry. Zviuru zvinoverengeka zveMudzidzisi nemudzidzi havadi kudya ipapo. ...
XIKOO inotakurika mhepo inotonhorera XK-15SY yekudzidzira nzvimbo
Guangdong Vocational Koreji Yekutakura yakatsvaga mhepo inotonhorera yechikoro, vakaonana nevatengesi vakati wandei vakavakumbira kuti vatore mhepo inotonhorera kuyedza. Mushure mevashandi vechikoro cheki, bvunzo ruzivo uye enzanisa. ivo vese vakati XIKOO mhepo inotonhorera XK-15SY ndiyo yakanyanya kunaka. XIKOO XK-15S ...
XIKOO XK-75SY hombe mvura tangi mweya inotonhorera inotonhorera kuSingapore Presidential Palace yekunze konzati.
XIKOO nhare inotonhorera nharaunda ine hushamwari mweya inotonhorera inogona kushandiswa kwakawanda nzvimbo dzese dzinoda kufefeterwa uye kutonhodza, senge dzimwe nzvimbo huru dzevaraidzo, nzvimbo dzekupaka pasi pevhu, zvimwe zviitiko zvikuru zvekunze nedzimwe nzvimbo dzeruzhinji. Singapore Presidential Palace inobata konzati yekunze muna 20 ...
XIKOO XK-18SYA inoshandiswa kurima kunotonhorera
Mr.Mauro vanobva kuItari vane 700 mita metres purazi, Aive achitsvaga muchina kutonhodza iyo yakavhurika nzvimbo yepurazi, uye kumira pasi negokora kuunza mweya mukati. XIKOO yakakurudzira 6PCS XK-18SYA. Mushure mekunge VaMauro vawana zvinhu, akagovana nemhepo inotonhorera mafoto ekushanda nesu, ndokuti akanaka ...